Tech Story - နည်းပညာ & ဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ်
format converter ကို
disk နှင့် partition ကို
programming tools တွေ
Sandboxie 5.55.22 ဘာသာစကားမျိုးစုံ / 1.0.14 Plus အား
admin ရဲ့ မေလ 18, 2022 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ဖော်ပြချက် Sandboxie သည် ဝဘ်ကိုကြည့်ရှုနေစဉ် သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆော့ဖ်ဝဲကို လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝဘ်ကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်နေသည့်ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုခြင်းသည် စနစ်လုံခြုံရေးကို ဖြစ်စေသည်…
[ ... Reading Continue]
ဖော်ပြချက် MEmu Android Emulator Android ဂိမ်းများကို အထူးပြုသည့် Android emulator software MEmu emulator software ဖြင့် သင့်ကွန်ပြူတာတွင် တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်သော ထူးခြားသောခေါင်းစဉ်များစွာကို သင်ခံစားနိုင်သည်။ မင်း…
Udemy – NestJS- ပြီးပြည့်စုံသော Developer's Guide 2021
NestJS ၏ဖော်ပြချက်: ပြီးပြည့်စုံသော developer ၏လမ်းညွှန်သည်စမ်းသပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများပါ ၀ င်သော Nest, TypeORM နှင့် Typescript တို့နှင့်ပြည့်စုံသော backend တည်ဆောက်ခြင်းသင်တန်းဖြစ်သည်။ NestJS သည်အဆောက်အ ဦး အတွက် backend framework တစ်ခုဖြစ်သည်။
Kali Linux ကို 2022.2 x86 / x64
ဖော်ပြချက် Kali Linux သည် Debian Linux ကိုအခြေခံထားသော Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဟက်ကာများ၊ ဟက်ကာများနှင့်လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏အကြိုက်ဆုံးဖြန့်ချီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည် ...
Alpine Arena 1.1.577 – Android ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Alpine Arena သည် အက်ရှင်နှင့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော တေးဂီတများဖြင့် ပါ၀င်သည့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော စကိတ်စတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် အခြားကစားသမားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး အနိုင်ရရန် ကြိုးစားနိုင်သည်။ စစ်မှန်သော ဂိမ်းပစ္စည်းများကို မတူညီသောနေရာတွင် အသုံးပြုသည်...
Gunner Diary 1.0.17.1003 – Android ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Gunner Diary ဂိမ်းသည် မကောင်းဆိုးဝါးတပ်များကို ဖျက်ဆီးရန် ရည်ရွယ်သော ဂန္တဝင်သူရဲကောင်းတစ်ဦး၏ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ သူသည် မြို့ထဲတွင် ဂုဏ်သိက္ခာများစွာရှိပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး...
Blood Card 1.0 – Android ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Blood Card ဂိမ်းသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးဒြပ်စင်များနှင့် Rag Like ပေါင်းစပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဂိမ်းအတွင်း ပါဝါကတ်များရရှိကာ သင့်ရဲတိုက်ကို တည်ထောင်နိုင်သည်။ ဒီဒီဇိုင်းလေးဖြစ်မယ်…
Reckless Getaway22.2.6 – Android ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Reckless Getaway2သည် ဧရာမကားကြီးများနှင့် ရောနှောထားသော ကားများဖြင့် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ကာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စွဲလမ်းစေသော ပြေးလွှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းသည် အလွန်လှပပြီး ရိုးရှင်းသော ဂရပ်ဖစ်ပါရှိပြီး…
Taxi Sim 2016 3.1 – Android ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Taxi Sim 2016 သည် Taxi Sim ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းဖြင့် သင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့် Android လည်ပတ်မှုစနစ်အတွက် အကောင်းဆုံးတက္ကစီကားမောင်းခြင်း simulation ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှာယူလိုပါက…
Pirates Outlaws 3.30 – Android ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Pirates Outlaws သည် သူရဲကောင်းများ၏ ဖဲချပ်များကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး သင့်အဖွဲ့တွင် အကောင်းဆုံး တိုက်ခိုက်ရေးသမားအုပ်စုတစ်ခု ရှိနိုင်ပါသည်။ ဇာတ်ကောင်များကို ကြိုတင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး သင်...
The Elder Scrolls: Legends 2.15.1 – Android ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
The Elder Scrolls: Legends မိုဘိုင်းဂိမ်းသည် Alder Scrolls စီးရီး၏ ပရိသတ်များကို စိတ်ကျေနပ်စေမည့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကို ဇာတ်ရုပ်ပုံစံဖြင့် တင်ဆက်ထားသည်။ ...
1234... 1,351 နောက်တစ်ခု
အားလုံးတ ဦး တည်းဗီဒီယို DOWNLOADER
ဖုန်း software ကို
နည်းပညာပုံပြင် မူပိုင်ခွင့်© 2022 ။